जानकारी Archives | Page2of 20 | Nepali In Japan
16Mar By Nepali In JapanNo Comments
किन विवाह गर्दैनन् जापानीहरु ?
जापानमा अविवाहितको संख्या उच्च छ । सरकारी तथ्यांकअनसार २० देखि ४९ वर्ष उमेरका करीब एक चौथाई मानिसहरु एकल छन् । यो उमेरका मानिसहरुले प्रायः विवाह गर्ने इच्छा त राख्छन् । तर पुरातन सामाजिक धारणा र बढ्दो आर्थिक् दबाबका कारण विवाह बन्धनलाई झन झन कठिन बनाइरहेको छ । विवाहको उमेरसम्मै अभिभावकसँग बसिरहेकाहरुलाई तत्कालै जीवनसाथी खोज्ने दबाब अलि कम हुने टोकियोस्थित चुओ विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रका प्रध्यापक मासाहिरो यामादाले भने । ‘आफ्ना शर्तहरु पूरा नगर्ने कसैसँग सम्बन्धमा रहनुलाई उनीहरु समयको वर्वादी ठान्छन्,’ उनले भने । अनि उनीहरु राम्रो विकल्पको लागि पर्खन पनि नसक्ने उनको भनाई छ । यस्ता मानिसहरुलाई उनले ‘परजीवित एकल’को संज्ञा दिएका छन् । श्रीमान वा श्रीमतिसँग दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षालाई महत्व दिइने भएपनि बुताले धान्न सक्ने घर खोज्न हुने कठिनाईका कारण उनीहरु आमा–बुबासँगै बस्न बढी प्रेरित हु...
जापानी विद्यालयका अचम्म लाग्ने १५ नियम
बालबालिकाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमध्ये विद्यालय जानु पनि एक हो । विहान चाँडै उठ्ने, विद्यालय जाने र गृहकार्य गर्ने जस्ता जिम्मेवारी एक विद्यार्थीको हुन्छ । यस्तो सिकाईको वातावरणमा पनि अधिकांश कुराहरु त्यस्ता हुन्छन् जो धेरैलाई मन नपर्न सक्छ । विद्यालयमा पालना गर्नुपर्ने केही नियमहरु हुन्छन् जो कतिलाई मन पर्दैन । कुनै कुनै विद्यालयमा दौडिन, चुइङ्गम चपाउन र मोबाइल फोन चलाउन पाइँदैन । जापानका विद्यालयहरुको व्यवस्थापनक अलग किसिमले गरिएको हुन्छ । यहाँको पढाइ कडा हुन्छ र विद्यालयका नियमहरु पनि कहिँ नसुनेका जस्ता लाग्ने हुन्छन् । आजको लेखमा जापानी विद्यालयमा हुने केही नियमबारे जानकारी दिन लागिएको छ । १.हाजिरी विद्यालयमा समयमै उपस्थित हुनु एकदमै महत्वपूर्ण छ । विद्यार्थीहरु विहानको साढे ८ बजे कक्षा कोठामा उपस्थित हुनैपर्छ । पाँच पटकभन्दा बढी समय विद्यालयमा ढिलो आउने विद्यार्थीले विहा...
14Mar By Nepali In JapanNo Comments
जापानमा घर किन्ने प्रकृया
हुन त जापानमा पनि घर खरिद गर्ने प्रकृया अन्य राष्ट्रमा रियल इष्टेट खरिद गरेजस्तै हो । यद्यपि, भाषा बोल्न र पढ्न नसक्नेका लागि भने घर खरिद गर्ने वास्तविक प्रकृया अलि कठिन र धेरै समय लिने खालको पनि हुन सक्छ । आजको लेखमा घर खरिद गर्ने ८ ओटा सहज प्रकृयाबारे बताइएको छ । प्रकृयाबारे जान्नुअघि विदेशीले जापानमा घर खरिद गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्नेबारे जानकारी लिनु राम्रो हुन्छ । के विदेशीले जापानमा घर सम्पत्ति खरिद गर्न पाउँछन्? जापानमा घर खरिद गर्न त्यस्तो कुनै कानूनी बन्देज छैन । उनीहरुले घर खरिद गरेको २० दिन भित्र बैङ्क अफ जापानलाई एउटा सूचना पत्र जारी गर्न चाहिँ पर्छ । जापानमा घर किन्न यहीको नागरिकता वा स्थायी रेसिडेन्स भिसा नै चाहिन्छ भन्ने छैन । यदि तपाइसँग स्थायी रेसिडेन्स भिसा छैन, जापानी नागरिकसँग विवाह गरेको होइन र जापानमा कुनै काम गर्नुभएको छैन भने चै जापानी सम्पत्ति खरिद गर्न केही...
यसरी खाना खाने बानीले स्लिम रहन्छन् जापानी महिलाहरु
पश्चिमा क्षेत्रमा जापानीहरु कहिल्यै मोटाउँदैनन् भन्ने एउटा भ्रम छ । यो साँचो त होइन, तर जापानीहरु लामो समय बाँच्ने र सुन्दरताका लागि भने परिचित छन् । जापानीहरुको औसत आयु ८४ वर्ष छ । यसमा उनीहरुको संस्कार र सभ्यता मात्रै होइन खानपानको शैलीको पनि ठूलो भूमिका छ । आजको लेखमा जापानी महीलाहरु स्लिम र सुन्दर देखिन सहयोग गर्ने केही बानी र संस्कारबारे बताउने प्रयास गरिएको छ । १. खाने संस्कार जापानीहरुको खाना खाने संस्कार कुनै समारोहभन्दा कम हुँदैन । खाना खानुअघि उनीहरु ताली बजाउँछन् र टाउको झुकाएर भोजनप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्छन् । २.ब्रेकफाष्ट जापानीहरुको ब्रेकफाष्टमा दिनकै सबैभन्दा धेरै खाना खान्छन् । पारम्परिक जापानी ब्रेकफाष्टमा स्टिम्ड राइस, चिया, तरकारी, मिसो सुप, प्रोटिन (अण्डा वा माछा) र विविध किसिमका साइड डिसहरु हुन्छ । ३. बाइट साइज एउटा मात्रै खाना धेरै खानुभन्दा भन्दा पनि उनीहर...
13Mar By Nepali In JapanNo Comments
म जापानको नयाँ शहरमा बसाई सरेर गए भने छाडेर गएको शहरलाई आवास कर तिर्नु पर्छ कि पर्दैन ?
के हो आवास कर (ज्युमिन जेई) ? आवास कर (ज्युमिन जेई) प्रिफेक्चरल वा नगर सरकारले लगाउने कर हो । जनवरी १ मा तपाई जुन नगरपालिकामा बस्नु हुन्छ सोही नगरपालिकाले तपाईको अघिल्लो वर्षको आम्दानीका आधारमा आवास कर तिराउँछ । यो कर तपाईले जुनमा तिर्नु पर्छ । तपाई एक वर्षभन्दा कम समय जापानमा बस्नु हुन्छ भने आवास कर तिर्नु पर्दैन । तपाई सन् २०२२ को जनवरी २ मा नयाँ नगरपालिकामा बसाई सरेर जानु हुन्छ भने तपाईको पुराना ठेगाना भएको नगरपालिकालाई कर तिर्नु पर्छ । नयाँ नगरपालिकालाई तपाईले सन् २०२३ मा आवास कर तिर्न थाल्नु हुन्छ । सरेर गएपछि मैले आवास कर कसरी तिर्न सक्छु ? तपाई जापानको अर्को वडा वा शहरमा जानु भयो भने आफ्नो नयाँ ठेगाना नयाँ नगर वा वडा कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्छ । यो कसरी गर्ने भन्नेबारे तपाई यो लिंकमा पढ्न सक्नु हुनेछ । तपाईले पुराना वडा कार्यालयमा अन्यत्र जान लागेको सूचना दर्ता गराउने र बसाइ सर...
12Mar By Nepali In JapanNo Comments
कफी भर्सेस चिया, जापानमा कुन धेरै लोकप्रिय छ ?
जापान विश्वको सबैभन्दा ठूलो कफी खपतकर्ता देशमध्ये एक हो । त्यति यति धेरै कफी खपत भएको देख्दा मलाई मात्रै होइन तपाईहरुलाई पनि अचम्म लाग्छ होला । अहँ, साच्चै हो । नेपालमा कफी भन्दा चिया बढी लोकप्रिय छ । त्यसैले होला जापानीहरुले यति धेरै कफी खाएको देख्दा मलाई अचम्म लाग्छ । जापानमा कफी र चियामध्ये कुन चाँही धेरै लोकप्रिय छ भन्ने थाहा पाउन तपाईले धेरै कुरा गर्नै पर्दैछ । मात्र जुनसुकै दिशातर्फको सडकमा केही मिनेट हिडे पुग्छ । तपाइले देख्नु हुने यहाँका हरेक भेण्डिङ मेशिनमा कम्तिमा पनि २ प्रकारको कफी हुन्छ । जापानमा खपत हुने अधिकांश कफी अरु देशबाट आयात हुन्छ । त्यहाँ कफी खपत बढ्न थालेको धेरै वर्ष भयो । तर अहिले भने जापानीहरुमा कफी संस्कृति पनि बढेको छ । जापान विश्वको चौंथो ठूलो कफी आयातकर्ता हो । जापान टुडेका अनुसार ब्राजिल, भियतनाम र कोलम्बियाबाट मात्रै जापानमा भित्रिने कुलमध्ये ६७ प्रतिशत ...
विद्यार्थीका लागि उपयुक्त जापानका ७ शहरहरु
टोकियोे शहरी जीवनशैली मनपर्नेहरुका लागि जापानको राजधानी टोकियो पढ्नका लागि उत्तम स्थान हुन सक्छ । राजीतिक, आर्थिक र फेशनको राजधानी टोकियोमा सिन्ज्युकु, आकिहावारा, सिबुया र हाराज्युकु जस्ता चर्चित शहरहरु पनि छन् । नवप्रवर्तक प्रविधि र परम्पराको मिश्रण पाइने यस शहरको संस्कार हेर्दा जोकोहिले पनि यहाँ त जे पनि हुन सक्छ भन्ने अनुमान लगाउन सक्छ । यहाँका अधिकांश स्टोर र रेष्टुराँहरु राती अबेर सम्म खुला हुन्छन् भने रात्रीकालिन जिवन पनि लोभलाग्दो छ । तर यहाँको घर भाडा र खानेकुराको लागत हेर्ने हो भने टोकियोको जीवनशैली धेरै नै महङ्गो पर्छ । यहाँ विदेशीहरुका लागि जापानको अन्य क्षेत्रभन्दा प्रशस्त मात्रामा रोजगारीका अवसर उपलब्ध हुनुका आफ्नो करियर बनाउने सोचमा रहेकालाई पनि प्रशस्त अवसरहरु रहेका छन् । योकोहामा जापानको अर्को लोकप्रिय शहर हो योकोहामा । जापानको सबैभन्दा ठूलो चाइनाटाउन र मिनातोमिराई यहाँ ...
जापानमा फोटो खिच्दा पालना गर्नुपर्ने ५ नियमहरु
कुनै पनि देशका आ–आफ्नै नियम कानून हुन्छन् । र यो कुरामा तस्वीर खिच्ने मामिला पनि अछुतो छैन । फोटोग्राफीको सबैभन्दा पहिलो नियम हो 'नियमको पालना गर्ने' । पर्यटन क्षेत्रमा तस्वीर खिच्नेबारे लेखिएका संकेतहरु हेरेर यदि त्यहाँ तस्वीर खिच्न पाइने भए मात्र मात्र तस्वीर लिनु पर्छ । तर जापानमा भने विशेषगरी स्थानीय नागरिकको पनि संलग्नता भएमा तस्वीर खिच्दा अपनाउनै पर्ने त्यस्ता खासै नियमहरु छैनन् । तपाई प्रोफेसनल क्यामराम्यान हुनुहुन्छ वा सिक्दै गर्नुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ अथवा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि फोटो खिच्नुहुन्छ भने आजको लेखमा जापानमा तस्वीर खिच्दा काम लाग्ने केही उपयोगी टिप्सबारे बताउने प्रयास गरिएको छ । १. शान्तीको संकेत (भि साईन) जापानमा तस्वीर खिच्दा आफूलाई रमाइलो लागिरहेको देखाउन शान्तीको संकेत अर्थात (भि) साइन बनाएर तस्वीर लिइन्छ । यसो गर्दा तपाईको तस्वीर खराब आउँछ कि भन्ने चिन्ता भएपनि ...
यस्तो छ जापानमा ‘खान्पाई’ को इतिहास
जापानीहरु मदिरा पिउनुभन्दा अगाडि गर्ने टोष्ट (ग्लास एक आपसमा ठोक्काउने काम) लाई ‘खान्पाई’ भन्छन् । जापानीहरु ‘चियर्स’ को सट्टा ‘खान्पार्ई’ शब्दको प्रयोग गर्छन् । यो त्यति ठूलो कुरा भएन । तैपनि उनीहरुको पिउने संस्कारमा चियर्स को सट्टा खान्पाईले कसरी ठाउँ लियो भन्ने केही सत्य तथ्य त होला नी ? हो आजको लेखमा यसै विषयमा जानकारी दिने प्रयास गरेका छौं । सुरुवातमै भनिहालौं, यो लेख मदिरा सेवनका लागि उक्साउन या मदिरा प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने ध्येयले लेखिएको हैन । मदिरापान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ । १.पिउनुभन्दा अगाडि टोष्ट किन गरिन्छ ? खान्पाईबारे कुरा गर्नु अघि मानिसहरु यत्तिकै पनि पिउनु अघि टोष्ट किन गर्छन् होला भन्ने कुराबारे बुझौं । पिउँदा टोष्ट गर्ने चलन भग्वानका लागि भग्वानकै मदिरा पिउने र मृत्यु भएका मानिसका नाममा पिउने धार्मिक समारोहबाट आएको मानिन्छ । टोष्ट गर्नुका पनि मुख्य दुई क...
10Mar By Nepali In JapanNo Comments
जापानमा बस्दा खानामा हुने खर्च कम गर्ने उपायहरु
जीवनशैली हेर्ने हो भने धेरै महँगा देश मध्येमा जापान पर्दछ । विशेष गरि विधार्थीहरुको लागि टोकियो जस्ता ठूला सहरमा जीबनयापन गर्न मुस्किल नै हुन्छ । व्यस्त दैनिकी र समयको अभावका कारण महँगा पसलहरुमा किनमेल गर्दा बढि खर्च भैरहेको हुन्छ । आँफैले घरमा बनाएर खाने समयको अभावले वाहिर महंगा रेष्टुरेन्टहरुमा खाना खानुपर्ने बाध्यता पनि हामीमाझ छ । आजको पोष्टमा हामी तपाईहरुलाई जापानमा रहँदा अपनाउन सकिने ५ वटा अत्यन्त महत्वपूर्ण तरिकाहरुको वारेमा जानकारी गराउदैछौ जसले गर्दा तपाईको खानामा हुने फजुल खर्चलाई केही हदसम्म कम गराउन सक्छ । यो पोष्टको उद्देश्य दुख गरेको पैसा सहि तरिकाले खर्च गर्नुस् र केही बचत गर्नुस् भन्ने हो । १. होलसेल पसलहरुमा किन्नुहोस् जापानमा तपाईले २ ठाउँबाट सामान किन्न सक्नुहुन्छ, होलसेल र खुद्रा । इओन, दाइएइ, सेइयु, इतो योकादो जस्ता खुद्रा सुपरमार्केटहरु हुन् । यदी तपाई पैसा बचत ...
जापानको ओमियागे संस्कृति
ओमियागे शब्दको अनुवाद चिनो भन्ने हुन्छ । तर जापानमा ओमियागे दिने चलन पश्चिमी देशमा व्याप्त चिनोसम्बन्धी मौलिक अवधारणा भन्दा निकै फरक छ । जापानी समाजमा ओमियागेको प्रचलनले जरो गाडेर बसेको छ । यो चलन यति धेरै गहन छ कि कोही व्यक्ति कतै घुमेर आउँदा हातमा उपहार नल्याएको देख्दा मानिसहरुले निधार खुम्च्याउँछन् । आजको यस लेखमा हामीहरु जापानको उपहार आदानप्रदानको अनौठो संस्कृति र तपाईले आफ्ना सहकर्मी र आत्मिय व्यक्तिका लागि किन्न सक्ने उत्तम ओमियागीबारे कुराकानी गर्नेछौं । के हो ओमियागे ? ओमियागे शब्दको अंग्रेजी अनुवाद चिनो हो । तर ओमियागेको अवधारणा फरक छ । यसमा तपाईले आफ्नो लागि भन्दा पनि अरुका लागि उपहार किन्नु हुन्छ । । विशेषगरी यो कुनै यात्राबाट फर्किदा आफ्ना सहकर्मी, परिवारका सदस्य वा साथीभाइका लागि किनेर ल्याइने उपहार हो । पश्चिमी देशहरुमा चिनोको रुपमा प्रायः किरिङ, लत्ता कपडा वा लुगाफाट...
आय कर विवरण पेश र कर भुक्तानीमा ढिलाई गरे लाग्ने जरिवाना
जापानमा आय कर विवरण पेश गर्ने भनेको तपाईले आफू पाउनु भएको तलबमा तिर्नु पर्ने करको हिसाब गर्नु हो । तपाईले आय कर विवरण बुझाउनु छ भने आउँदो वर्षको फेब्रुअरी १६ देखि मार्च १५ को बीचमा पेश गर्नु पर्छ । तोकिएको म्यादभित्र विवरण पेश गर्न सकिएन भने तपाईले दन्डको सामना गर्नु पर्ने हुन सक्छ । आजको यस लेखमा हामीहरुले कर विवरण बुझाउन ढिला भयो भने कस्तो खालको दन्ड सजाय भोग्नु पर्छ भनेर बताउन गइरहेका छौं । दुई खालको जरिवाना भुक्तानी कर विवरण बुझाउन ढिला हुँदा दुुई खालको दन्ड छ । त्यो होः अतिरिक्त कर र कर बक्यौता अतिरिक्त कर - तपाईले समयमै आय कर विवरण बुझाउन सक्नु भएन वा करको रकम गलत हिसाब गर्नु भयो भने यस्तो खालको जरिवाना तिर्नु पर्छ । कसुर कर - तपाईले समयमै कर तिर्न सक्नु भएन भने यो कर लगाइन्छ । कर विवरण पेश गर्ने र कर भुक्तानीको म्याद गुज्रियो अतिरिक्त कर र कसुर कर दुबै तिर्नु पर्ने हुन सक...